भित्री ब’स्त्रको प्रयोग गर्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा
मानिसलाइ अाफु कसरी राम्राे देखिन्छ भन्ने अलि बढी चासाे हुन्छ तर अाफ्नाे स्वास्थ भन्दा पनि अाफ्नाे रूपरंग हेर्नु उचित हुदैन् । त्यसैले बाहिरी ब’स्त्र खरिद गर्दा त्यसको रुपरंग, बनौट सबै कुरामा ध्यान दिन्छौं, ताकि आफुलाई सुहाउँदो होस् । तर, भित्री बस्त्र नि ? किनभने भित्री ब’स्त्र खरिद गर्दा त्यसको बारेमा खासै ख्याल राख्नुहुन्न । किनभने तपाईं-हामीलाई लाग्छ, भित्री ब’स्त्र भनेको छोपिने चिज हो । देखिने भए पो राम्रो हुनुपर्छ ।
भित्री ब’स्त्र छालामैत्री वा सहज हुनुपर्छ । अन्याथा यसले शरीरमा अ’सर गर्न सक्छ । हुन त हामीलाई यस्ता कुरा वाहियत लाग्छ वा सामान्य लाग्छ । तर, प्रजनन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले भित्री ब’स्त्रको बारेमा संवेद’नसिल हुनैपर्छ ।
कपडा धेरै किसिमको हुनेगर्छ । त्यसमध्ये सुतीको कपडा राम्रो हो । भित्री ब’स्त्रका लागि सुती नै सही हुनसक्छ । सुतीको भित्री ब’स्त्र लगाउँदा सिल्क वा सिन्थेटिकको जस्तो सम’स्या हुँदैन । सिल्क वा सिन्थेटिकमा हावा पस्दैन । यसले छालाको इन्फे’क्सन हुनसक्छ । सिन्थेटिक कपडा नै किनेपनि भित्रको लाइनिङ सुतीकै हुनुपर्छ ।
भित्री ब’स्त्र कुन साइजको लिने ? त्यो तपाईंको शरीरमा निर्भर गर्छ । कसैलाई ठूलो चाहिएला, कसैलाई मझौला, कसैलाई सानो । आफुलाई फिट हुने भित्री बस्त्र किन्नुपर्छ । यसको पे’न्टी, ब्रा जेसुकै होस्, आफ्नो नाप अनुसार सही छ भने हिँडडुल गर्न सजिलो छ ।
कस्तो रंगको भित्री बस्त्र’ ? यो प्रश्न तपाईलाई वाहियात लाग्न सक्छ । तर, चिकित्सकहरु भन्छन् सेतो पे’न्टी लगाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । रंगबिरंगी पे’न्टी आकर्षक देखिएपनि सफा एवं सेतो रंगको भित्री ब’स्त्र नै राम्रो हुन्छ ।
पेन्टी कहिले बदल्नुपर्छ ? अक्सर यसबारे हामी उति ख्याल गदर्नौं । अरु लुगा, जुत्ता आदि त समय समयमा वा फेसन अनुरुप बदल्छौं । तर, पे’न्टी ? पेन्टी निश्चित अवधीमा बदल्नुपर्छ । धेरै समय एउटै पे’न्टी प्रयोग गर्दा त्यसले प्रजनन अं’गामा सम’स्या ल्याउन सक्छ ।
पे’न्टीमा यी कुरा ख्याल गर्नुपर्छ:
खासगरी यो विषयमा महिलाहरुले स’र्तक हुन आवश्याक छ । जब तपाईं पे’न्टी धुनुहुन्छ, त्यसअघि पे’न्टीमा राम्ररी हेर्नुहोस् । यसमा सेतो टा’टो देखियो भने चि’न्ताको विषय हुन्दैन तर रातो टा’टो देखियो भने स्त्री’रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु उचित हुन्छ ।
राती सुत्दा पे’न्टी लगाउने कि नलगाउने ?
राती सुत्दा पे’न्टी लगाउने कि नलगाउने ? संभव भएसम्म पे’न्टी नलगाई सुत्नु राम्रो हो । पे’न्टी नलगाइ सुन्दा महिलाहरुले छुट्टै आनन्द पाउँछन् र शरीरको त्यो भागलाई पनि रा’हत मिल्छ ।